China NO.4 igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ rụpụta na Factory | Huaxiao
NO.4 bụ ụdị elu polishing ọgwụgwọ usoro. Polishing na imecha nke igwe anaghị agba nchara na a egweri ihe na urughuru size nke 150 ~ 180 dị ka kpọmkwem na GB 2477.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere NO.4 igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ
Imecha: Mba 4, # 4, N4
Ihe nkiri: PVC, PE, PI, PVC Laser
Pallet ibu: 10MT
Commonzọ ndị a na-ahụkarị nke usoro ntinye igwe anaghị agba nchara na-esonye n'ụdị atọ: usoro silk kwụ ọtọ (HL), eriri naịlọn, na usoro snow (NO.4), nke bụkwa ụdị atọ.
1.Nnennen silk (ntutu ntutu) eri bụ ọka na-adịghị akwụsị akwụsị site n'elu ruo na ala. Ohaneze, workpiece nke ofu waya ịbịaru igwe nwere ike kpaliri azụ na-apụta.
2.Kpụrụ nịịl nwere ogologo na ogologo dị iche iche. N'ihi na ụkwụ nịịl dị nro n'ụdị, ọ nwere ike igweri akụkụ na-adịghị mma ma rute ụkpụrụ nịịlọn.
3. ụkpụrụ snow (NO.4) ugbu a bụ nke kachasị ewu ewu, nke nwere ntakịrị nkọwa, nwere ike nweta ya na akwụkwọ ahụhụ dị ka ahụhụ.
Usoro ịbịaru dị iche na ngwa nke igwe anaghị agba nchara, achọrọ ngwa na usoro a chọrọ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọ dị mkpa iji rụkwaa ma weghachite usoro ntinye ihe ntanetị iji mepụta nsonaazụ ikpeazụ, yana nsonaazụ eserese niile.
Enwere ike itinye elu nke cylinder ahụ naanị na lathe ma ọ bụ grinder. Naanị ya chọrọ ọgwụgwọ elu. Enwere ike ijikọta ya na abrasive pụrụ iche wee jiri aja aja na akwa akwa mee ka elu lathe dị elu. Ọ bụrụ na nkenke na oke ike dị elu, achọrọ igwe igwe. Ehichaala.
Mgbe a dọtara elu ahụ, a na-emeso naanị akwụkwọ mpempe akwụkwọ naanị. Mgbe emere elu nke mbido mbụ nke NO.4 (snowflake) ma ọ bụ HL (bupụrụ), a na-edozi ngwaahịa ahụ agwụ (nwụọ, ihe osise miri emi, wdg). Mgbe usoro nhazi zuru oke, ngwaahịa a gwụchara nwere ike idowe mmetụta nke mbido mbụ.
Nnennen mmanụ: Ọ kwesịrị pụtara mmanụ ogologo waya, na-eru mgbe mmanụ-egweri, elu nke ink bụ chawapụrụ mgbe ink, na mgbe a oyi akwa nke waya ịbịaru, nke bụ ụdị nke frosting, bụkwa nke elu ọgwụgwọ, ugbu a nwere a full mpịakọta nke ink dọtara Tụnyere nkịtị waya ịbịaru, mmanụ-egweri ogologo waya nwere uru nke doro anya leghaara udidi, mma n'anya udidi, ezi gloss na magburu onwe mkpokọta mmetụta, na na ọtụtụ-eji mbuli mma na ndị ọzọ na ngwá na elu elu chọrọ .
Nke gara aga: BA igwe anaghị agba nchara
Osote: Nkenke igwe anaghị agba nchara
Mirror Polish igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Polished igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Polished igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ Metal
Polish igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ Ahịa
Polish igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ